सलमानले किन खेले विवेकको करियरमा ? १५ वर्षपछि विवेकले खोले यस्तो रहस्य – Medianp
सलमानले किन खेले विवेकको करियरमा ? १५ वर्षपछि विवेकले खोले यस्तो रहस्य
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २८, २०७५१२:२९
काठामाडौँ । बलिउड स्टार सलमान खान र अभिनेता विवेक ओबराएमा निकै ठूलो दुश्मनी रहेको छ । सलमानको पुर्व प्रेमीका समेत रहेकी विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चनसँग विवेक सम्बन्धमा रहेको भन्दै सलमानले उनलाई मार्ने धम्की समेत दिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
केपीएलको दोस्रो संस्करण वैशाख १२ देखि सुरु , ८ टिमको सहभागिता हुने
सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि सेन लुङ च्यातिएका मोजा लगाएर पार्कमा नाति–नातिनासँग रमाउँदै
सन्नी देवल भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश, चुनाव उठ्ने तयारी
यस्तो आयो प्रतिक्षित फिल्म भारतको ट्रेलर